त्रिभुवन विमानस्थलले उठाउने बक्यौता झण्डै सवा २ अर्ब, सरकारी निकायको मात्रै ५६ करोड, कसको कति ? (सूचीसहित) — Arthatantra.com
Arthatantra.com > Headline > त्रिभुवन विमानस्थलले उठाउने बक्यौता झण्डै सवा २ अर्ब, सरकारी निकायको मात्रै ५६ करोड, कसको कति ? (सूचीसहित)
त्रिभुवन विमानस्थलले उठाउने बक्यौता झण्डै सवा २ अर्ब, सरकारी निकायको मात्रै ५६ करोड, कसको कति ? (सूचीसहित)
काठमाडौं । देशको एक मात्रै अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलले संस्था, कम्पनी, फर्म वा व्यक्तिले बुझाउनुपर्ने बक्यौता मात्रै झन्डै २ अर्ब ११ करोड पुगेको छ ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार साउन महिनासम्मको बक्यौता २ अर्ब १० करोड ८८ लाख ६३ हजार ४ सय ४ रुपैयाँ पुगेको हो ।
यो रकम सञ्चालनमा रहेका तथा नरहेका ती संस्था र कम्पनीको हो । यो रकममा पछिल्लो समयको विलम्बबापतको जरिवाना शुल्क भने जोडिएको छैन ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सूचना अधिकृत त्रिलोचन पौडेलका अनुसार सञ्चालनमा रहेका अन्तराष्ट्रिय उडान भर्ने एयरलाइन्स कम्पनीको साउन महिनासम्मको बक्यौता रकम मात्रै ८२ करोड ७ लाख ६५ हजार ५ सय १२ रुपैयाँ रहेको छ।
यसैगरी सञ्चालनमा रहेको आन्तरिकतर्फ उडान भर्ने एयरलाइन्स कम्पनीहरुको बक्यौता भने ४ करोड ४४ लाख २ हजार १ सय १ रुपैयाँ रहेको छ ।
सञ्चालनमा नरहेका आन्तरिकतर्फ उडान सेवा दिएका एयरलाइन्स कम्पनीको भने ८ करोड ४३ लाख ७५ हजार १ सय ८४ रुपैयाँ छ भने सञ्चालनमै नरहेका आन्तर्रा्ष्ट्रिय हवाई सेवा प्रदान गर्ने एयरलाइन्सको बक्यौता ४ करोड ८३ लाख ७२ हजार रुपैयाँभन्दा बढी छ ।
यसैगरी विभिन्न नामका सरकारी कार्यालयको बक्यौता रकम पनि ५६ करोड १५ लाख ५५ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।विमानस्थलभित्रै विभिन्न सेवा प्रदान गर्दै आएका तथा व्यापार व्यवसाय गर्दै आएका कम्पनीहरुको पनि ५१ करोड ८७ लाख ८९ हजार रुपैयाँ र सञ्चालनमा नरहेका कम्पनीहरुको नाममा ३ करोड ६ लाख २ हजार रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ ।
सबै शीर्षकमा गरी साउन मसान्तसम्मको बक्यौता रकम २ अर्ब १० करोड ८८ लाख ६३ हजार ४ सय ४ रुपैयाँ उठ्न बाँकी रहेको सूचना अधिकृत पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
प्राधिकरणले एयर एसियाले उडान बन्द गरे पनि बाँकी बक्यौता रकमलाई भने सञ्चालन एयरलाइन्सकै सूचीमा राखेको छ । एयर एसियाले गत असोजदेखि नेपालमा उडान बन्द गरेको थियो ।
साथै भारतीय जेट एयरवेजलाई पनि सञ्चालनकै सूचीमा राखिएको छ । तर यो एयर कम्पनीले आर्थिक संकटका कारण नेपालमा अप्रिलदेखि उडान बन्द गरिसकेको छ ।
प्राधिकरणले लामो समयदेखि बक्यौता नतिरेको र बन्द भएका कम्पनी तथा एयरलाइन्सको बाँकी बक्यौताका लागि आज सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको छ ।
प्राधिकरणले ३० दिनको सूचना जारी गर्दै बाँकी रकम तिर्न आउन भनेको छ । तोकिएको समयभित्र रकम भुक्तानी गर्दै प्राधिकरणलाई सहयोग गर्न प्राधिकरणले सूचना जारी गरेको पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
तोकिएको समयमा बक्यौता भुक्तानी नभएको अवस्थमा भने कानुनी उपचार खोजिने प्राधिकरणको सूचनामा उल्लेख छ ।
[pdf-embedder url=”http://www.arthatantra.com/wp-content/uploads/2019/09/airport-due-nepallive.com_.pdf” title=”airport-due – nepallive.com”]
२०७६ असोज ०७ गते प्रकाशित
२०७६ असोज ७ गते १५:५३ मा प्रकाशित
चाडबाडको मुखमा कालोबजारी र मुल्यवृद्धि गरे तत्काल कारबाही गर्छौंः महानिर्देशक गौचन
विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट समातिएको ३३ किलो सुन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको !
प्रभु बैंकको बिहानी सेवा संचालनमा
फेसबुक र ट्वीटरबाट स्थानीय तहको चुनाव प्रचार गर्दै हुनुहुन्छ भने होशियार !
असार १५ धान रोपाईसँगै दहि चिउरा खाने दिन, यस्तो छ रोपाईँको अवस्था
प्रधानमन्त्रीले फोनबाटै गरे देशकै उत्कृष्ट सहकारी घोषणा